Baarlamaanka Turkiga oo meelmariyay sharci awood siinaya Erdogan (Daawo) - Hablaha Media Network
Baarlamaanka Turkiga oo meelmariyay sharci awood siinaya Erdogan (Daawo)
HMN:- Baarlamaanka Turkiga ayaa si hordhac ah u meelmariyay dastuur cusub oo awoodo dheeraad ah siin doona madaxwayne Recep Tayyip Erdogan. Waxaa jiri doona wareeg labaad oo xildhibaanadu ay u codayn doonaan todobaadkan haddii ay meelmariyaanna afti ayaa la qaadi doonaa.
Baarlamaanka Turkiga ayaa si hordhac ah u meelmariyay dastuur cusub oo awoodo dheeraad ah siin doona madaxwayne Recep Tayyip Erdogan. Waxaa jiri doona wareeg labaad oo xildhibaanadu ay u codayn doonaan todobaadkan haddii ay meelmariyaanna afti ayaa la qaadi doonaa.
Laakiin madaxwaynuhu wuxuu sheegay in isbadalkan uu la simi doono madaxda Faransiiska iyo Maraykanka, Dastuurkan cusub wuxuu ogolaan doonaa in madaxwaynuhu uu magacaabo ama shaqada ka eryo wasiirrada iyo in uu meeshaba ka saari karo ra’iisal wasaaraha waxayna arrintaasi noqon doontaa markii u horaysay taariikhda Turkiga.
Taas badalkeedana waxaa jiri doona ugu yaraan hal madaxwayne ku xigeen. Qodobada dambe ee dastuurka waxaa la ansixiyay xilli dambe oo Axaddii ah, xisbiga talada haya ee AKP ayaana helay tiradii xusbnaha baarlamaanka ee ay u baahnaaayeen.